Be ny zava-bita ratsy no ho ny tsara | NewsMada
Be ny zava-bita ratsy no ho ny tsara
Simba efa ho enina andro sa enim-bolana ny tongo-tsezan’ity tokantrano iray. Tonga ny raim-pianakaviana ela tsy hita, nanao fiavian’ny tafara: aviavy nanamboatra. Koa seza fihinanany tsinona… Avy eo, nievotrevotra teo ambonin’izany sy niedinedina eran’ny trano hatrany an-tokotany izy fa tsy misy mahavita ny vitany, hono. Tsy toy inona ny nanamboarany izay tsy vita tao anatin’ny enina andro sa enim-bolana.
Amin’izany, tsy ny seza ihany anefa no simba, fa izay no mba hitany sy vitany. Saika tsy ahoana avokoa ny fanaka ao an-tokantrano: lany andro, drodroka… Manampy trotraka ny loto sy ny fisaritahana. Eo ny voalavo avy any ivelany mandrava efa; ny trano mibanaka, idiran’ny mpangalatra tsy andro tsy alina; ny ankizy, zara raha mihinana sy samy manao izay saim-pantany… Asa, ahoana ny hiafarany?
Tsy mifankaiza amin’izany ve ny zava-misy sy izay iainana amin’izao fitondrana izao? Tsy firy na tsy inona vita, hirahiraina sy mampievotrevotra ery ny hoe tsy misy mahavita ny vita tao anatin’izany enimpolo taona izay. Tsy vitan’izany, sahy milaza aza fa vita tao anatin’ny efa-taona monja izay tsy natao hatramin’izay. Tsy misy toa azy? Eo ny tsirairay sy ny tantara mitsara amin’izay iainana.
Tsy misy toy izay misy hatramin’izay tokoa ny zava-misy sy izay iainana amin’izao? Eo ny tsy fanarahan-dalàna, ny kolikoly amin’izay mihetsika sy ihetsehana rehetra, ny fivarotan-tanindrazana anjakazakan’ny vahiny, ny harem-pirenena robain’ny hafa, ny tontolo iainana potiky ny mpandrava efa, ny tsy fandriampahalemana sy ny fakana an-keriny mahazo vahana… Inona izay zava-bita amin’izany rehetra izany?
Tsy mahaleo ny zava-doza iainana isan’andro vaky izay zavatra kely mba natomboka. Na ny fandokafan-tena lava efa mahatofoka amin’izany aza, tsy mbola misy nahavita ny vitan’ny tena? Tsy zazabodo na bado ny vahoaka ka tsy hahita sy tsy hahalala fa mila fanovana… Rahoviana vao mba ny tsara no be no ho ny ratsy?